NamasteNEPALI.com: मानिसको रगत उमाल्ने यी जनवादी गायकहरु के गर्दैछन् ?
मानिसको रगत उमाल्ने यी जनवादी गायकहरु के गर्दैछन् ?
अर्घेलो थापा, काठमाडौं ९ वैशाख - भनिन्छ, गीत संगीत चेतनाको सूचक हो । समाजका विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्न गीत महत्वपूर्ण माध्यम हुने ठानिन्छ । गीतकै माध्यमबाट समाजमा चेतना फैलाउने सशक्त र महत्वपूण धार प्रगतिशील धार धार हो ।
- लोकान्तर डट कम